ARA-DALÀNA NY TORO-HEVITRA MIKASIKA NY FAMPINDRAMAM-BOLA
TOROHEVITRA ARAKA NY LALÀNA EO AMIN’NY FAMPINDRAMAM-BOLA
Raha toa ka naka avy tao, ary mandrahona hetra
Ireo sy ny maro hafa fanontaniana ireo nanontany ny borrowers izay manana olana ara-bola mba hiverina ny findramam-bola ny vola.
Ny olona tsirairay olana findramam-bola
Ho tsara ny fanapahan-kevitra ny carte olana ilaina ara-dalàna ny toro-hevitra mikasika ny fampindramam-bola, izay hilaza aminao ny fomba tsara indrindra mba miroso amin’ny omena ny toe-draharaha.
Isaky ny findramam-bola, fifanarahana milaza ny fomba fitsaboana ho an’ny hamaly. Voalohany nanorim-ponenana ny sazy, avy eo dia liana, ary avy eo ihany ny vatana ny findramam-bola.
Teo ambany toe-javatra ireo, ny sasany borrowers mba handoa ny trosa tsy misy dikany
Hatramin’ny lahatsoratra ao amin’ny fehezan-dalàna Sivily hanome zo ny handidy onitra eo amin’ny mazava ho azy ny fitsarana.
Ho mpanjifa sasany azo ekena mety ho lasa ny safidy ny fanavaozan-trosa amin’ny alalan’ny tsikelikely na azo vetivety dia mankarary ny fandoavam-bola, ny antsoina hoe»fialan-bola». Mba hahazoana ny fanavaozan-drafitra dia tokony mampihatra ny Banky ny tsirairay avy manan-kery ny mailaka, izay ihany koa ny fanampiana mba hahatonga ny mpahay lalàna ao amin’ny banky ny raharaha.
Ara-dalàna ny toro-hevitra mikasika ny fampindramam-bola ao amin’ny-pitsarana miaraka amin’ny Banky.
Manome ny filazana ny fitsarana, banks be mampitombo ny habetsaky ny trosa amin’ny alalan’ny tsy sazy ara-bola. Raha ny misambo-bola mitana ny matoantenin’ny atao amin’ny toerana na tsy mandeha ny fitsarana, toy ny milaza afa-po tanteraka. Vokatr’izany, ny habetsaky ny trosa dia afaka mampitombo ny fotoana maro.
Raha ny Banky nandray ny misambotra ny fitsarana dia tsy voatery ho ratsy tahaka ny mety ho toa raha vao jerena. Ao ny raharaha ny tsy hita Banky momba ny fetra, izany no azo atao mba handresy ka ho tonga avy»unscathed».
Misy maromaro ny tsara fanapahan-kevitra ny fitsarana Tampony
Ankoatra izany, ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin’ny may — fotoana mba hampihena ny habetsaky ny sazy, fa izany dia tsy maintsy ho voalaza ao ny voasoratra fanoherana izay dia hanampy mba hahatonga ny mpisolovava fampindramam-bola
Ity Raharaha Ity Lalàna - Ny Famaritana, Ohatra, Toe-Javatra, Ny Fomba Fiasa